Dhaqaalaha madow: waa maxay iyo waa maxay cawaaqibta | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Encarni Arcoya | 22/05/2021 09:27 | Dhaqaalaha guud
Dhaqaalaha madow ma ahan wax dhawaanahan soo ifbaxay dhawr sano ka hor. Sidoo kale kuma eka Spain; Runtii adduunka ayey soo jirtay muddo dheer, dheer. Si kastaba ha noqotee, qaabkan lacag lagu dhaqaaqu wuxuu ku dambayn karaa inuu cawaaqib xun ku yeesho waddan.
Laakiin, Waa maxay dhab ahaan dhaqaalaha madow? Muxuu kaga duwan yahay dhaqaalaha sharci darrada ah ama aan rasmiga ahayn? Waa maxay saamaynta ay leedahay? Waxaan la macaamili doonnaa intaas oo dhan iyo inbadan oo kahooseeya.
1 Waa maxay dhaqaalaha madow
1.1 Dhaqaalaha dhulka hoostiisa, kuwa sharci darrada ah iyo kuwa aan rasmiga ahayn
2 Sababaha dhaqaalaha B
3 Cawaaqibka ka dhalan kara waddan
4 Dhaqaalaha madow ee Spain
Waa maxay dhaqaalaha madow
Dhaqaalaha madow waa in loo fahmaa sida "lacagta madow" ay ugu dhex wareegto wadan. Si kale haddii loo dhigo, waxay xusaysaa macaamil ganacsi oo kala duwan oo dhex mara shirkadaha, shakhsiyaadka, iwm. iyo in aan loo sheegin hay'adaha maaliyadeed ama lacagta ee karti u leh.
Un tusaale dhaqaalaha madow waxay noqon kartaa waxyaabaha soo socda:
Qiyaas inaad tahay rinji. Adiga ayaa sidaa sameeya oo waxaad leedahay macaamiil aad lacag ka bixiso adeegyadaada. Si kastaba ha noqotee, mid ka mid ah macaamiisha ayaa go'aansaday inuu ku siiyo lacag caddaan ah mana doonayo qaansheegad ama wax kasta oo muujinaya inaad u shaqeysay isaga. Waadna aqbashaa, laakiin ma cadeynaysid lacagtaas sababta oo ah uma baahnid inaad qiil u yeelatid.
Tani waxay la xiriirtaa, "bixinta B", sida lacagta lagu helay "daboolka hoostiisa" ama qaab aad u dhib badan in la raad raaco (badanaa lacagta gacanta lagu haysto, maadaama ay sidan tahay maahan inaad qiil u yeelatid) waa).
In kasta oo markii hore dhaqaalaha dhulka hoostiisa ahaa kan diiradda saarey waxqabadyadiisa iibinta daroogada, tahriibinta dadka iyo macaamil ganacsi ee aan canshuurta la bixin, haddana waxay sidoo kale tilmaamayaan qeybaha kale ee caanka ah: adeegyada, cuntada, iwm.
Dhaqaalaha dhulka hoostiisa, kuwa sharci darrada ah iyo kuwa aan rasmiga ahayn
Mid ka mid ah guuldarrooyinka marka ay timaado fahamka fikradda dhaqaalaha hooska waa in lagu jahwareeriyo nooca macaamil ee laga heli karo "suuqa madow", taas oo ah in la yiraahdo:
Dhaqaalaha sharci darrada ah, inay yihiin macaamil ganacsi oo lagu fulinayo waxyaabaha mamnuuca ah, sida hubka, dadka, daroogada ...
Dhaqaalaha aan rasmiga ahayn, taas oo noqon laheyd macaamil ganacsi oo, in kasta oo ay sharci tahay, aan lagu dhawaaqin.
Dhab ahaantii, dhaqaalaha dhulka hoostiisa ku jira dhammaantood waa sharci darro iyo mid aan rasmi ahaynba, maxaa yeelay waxay ka mid yihiin kooxda weyn ee sameysata, in kasta oo ereyga "suuq madow" uu inbadan uga jeedo dhaqaalaha sharci darrada ah, runtu waxay tahay in Suuqa maalinlaha ah waxaa sidoo kale jira joogitaan xoog leh oo ku saabsan dhaqaalaha aan rasmiga ahayn (sidaa darteedna quusay).
Sababaha dhaqaalaha B
Muxuu dhaqaalaha madow u soo baxay? Tani waa su'aal weyn, waxaana jiri doona kuwo badan oo u hiiliya iyo kuwo kale oo ka soo horjeeda. Sababaha sidoo kale way kala duwanaan doonaan iyadoo ku xiran hadday dhinac tahay ama dhinaca kale, taasi waa, waxay kuxirantahay inaad iibsade ama iible tahay.
Haddii aad tahay iibsade, sababaha aad u dooran lahayd dhaqaalaha madow samayn lahaa:
Ku hel wax soo saar qiimo jaban.
Hesho alaab aan si kale loo iibsan karin (sharci ahaan).
Como iibiyaha, sababaha waa isku mid:
Iibi qiimo jaban oo sidaas darteed tiro badan.
Uma baahnid in cudurdaar loo sameeyo xaddiga lacagtaas.
Ha ku bixin canshuuraha lacagtaas, taas oo u ah "wax walba" iibiyaha.
In kasta oo aynnu kor ku soo xusnay oo dhan, haddana waa inaan xusuusanno wixii aannu bilowgii ku sheegnay: dhaqaalaha dhulka hoostiisa ku jiraa wuxuu dalka ku yeelan karaa cawaaqib xun. Anaguna waanu kuu sheegi doonaa kuwee.
Cawaaqibka ka dhalan kara waddan
Qaar badan, xaqiiqda ah inaad lacag ku dalacdo oo aad ogtahay inaadan u baahnayn inaad ku dhawaaqdo ama aad cashuur ka bixiso wax shaqadiisa iyo dadaalkiisa jidheed ay adigu samaysay ayaa macno badan samaynaysa. Dhibaatadu waxay tahay, Haddii aan dhammaanteen sameynay taas, markaa ma jiri lahayn isbitaallo, waddooyin, caafimaad ... Sababtoo ah qofna waxba kuma soo kordhin doono dalka si arrimahaas loo qabto.
Taasina waa dhab ahaan mid ka mid ah cawaaqibta ugu weyn ee dhaqaalaha dhulka hoostiisa, ma aha canshuuraha lafteeda, laakiin luminta lacagtaas la ururiyey si ay awood ugu yeelato inay ku maal-gasho horumarinta waddanka iyo abuurista horumarin loogu talagalay danta guud.
Way cadahay taas dhaqaalaha dhulka hoostiisa laftiisu wuxuu abuuraa shaqo; laakiin kharashka shaqooyinka kale ee baaba'aya. Waana in shirkadaha, iyo shaqaaluhu u dhaqmaan si xalaal ah, oo u hoggaansamaya canshuuraha, bixinta, iwm. Ma la tartami karaan kuwa kale ee leh kharash yar, iyaga oo ku qasbaya naftooda inay xiraan, si ay u bixiyaan.
Xagga dowladda, waxay lumisaa dakhligii, kuwii loo adeegsan lahaa adeegyada loogu talagalay muwaadiniinta, sidaas darteedna, waddanku wuxuu billaabayaa inuu ka maqnaado waxa qofku u baahan yahay inta badan.
Laakiin sidoo kale heer shaqsiyeed waxaa jira cawaaqib xumo. Waana taas Dadkaas shaqeeya ma xaq u leeyihiin shaqo la’aan, ama hawlgab haddii loo baahdo, tan iyo, Lambarka Bulshada, qofkaasi ma shaqeyn oo, sidaa darteed, wax isaga u dhigma ma jiraan.
Sida iska cad, haddii lagugu qabto inaad ku kacayso khiyaano dhaqaale madow taas macnaheedu ma aha ciqaab 'jilicsan'. Waxaad la kulmi kartaa ganaaxyo iyo xitaa xabsiyo adoo adeegsanaya dhaqanadan sharci darrada ah. Iyo maya, adeegga aad bixiso ma aha mid sharci-darro ah (marka laga reebo tusaalooyinka aan ku aragnay dhaqaalaha sharci-darrada ah), laakiin waa, dhammaan kiisaska, inay la baxsadaan canshuuraha.
Cawaaqib kale oo ka dhasha dhaqaalaha dhulka hoostiisa ayaa si toos ah u saameeya iibsadayaasha; waana taas Ma sheegan karaan wax iibiyaha maxaa yeelay ma haystaan ​​dammaanad qaad sidoo kale risiidhada adeeggaas ama badeecaddu, marka hadday fashilanto, jabto, been abuurto ama la xado, waxay noqonayaan dhibbaneyaal "khiyaanooyin" ay sameeyeen.
Dhaqaalaha madow ee Spain
Spain, dhawr sano ka hor, waxay lahayd in ka badan 21% dhaqaalaha madowga ah ee GDP, taas oo ah shay aad ufarabadan (oo badiyaa waxaan kahadalnaa qiyaasid maadaama aanan si sax ah u garanayn boqolkiiba inta wax aan qiil loo heli karin). Qalalaasaha ayaa sii xumeynaya dhaqaalahan dhulka hoostiisa ah, kaliya ma ahan alaabada sharci darrada ah, laakiin sidoo kale kuwa aan rasmiga ahayn, maadaama ay raadinayaan inay helaan lacag iyaga oo aan bixin canshuur.
In kasta oo xaqiiqda ay tahay in la sameeyay habab difaac oo si aad ah loo kantaroolo si looga hortago jiritaanka dhaqaalaha noocan ah, haddana way ka sii jirtaa waddanka, tan iyo markii ay dawladaha adduunku "indhahooda" saareen in la soo afjaro, mowqifka Isbaanishka marka loo eego kuwa kale wax badan kama duwana. Taasi macnaheedu maahan inaan weli isku mid nahay? Haa iyo maya.
Waxaa jira qiyaas ah, inta u dhaxeysa laba ilaa shan milyan oo qof ayaa ka shaqeeya dhaqaalaha dhulka hoostiisa, Sababtoo ah waxay qabtaan shaqooyin aysan gadaal ka sheegin, ama inay iibiyaan alaabo sharci darro ah. Xaqiiqda ka leexashada canshuuraha, iyo sidoo kale qawaaniinta shaqada ayaa dalka u horseedi kara saameyn taban, tan iyo markii ay faqri noqotay
Waqtigaan la joogo, waxaa jira tallaabooyin ka dhan ah musuqmaasuqa bangiga, baabi'inta biilasha qiimaha badan, kormeerka xilliyada ee xisaabinta, tirtiridda lacagaha caddaanka ah, iwm. Waxaas oo dhami waxay hoos u dhigayaan dhaqaalaha madow. In kasta oo taasi yaraysay oo gaabisay macaamilkii waxoogaa, haddana wali waxay ku sugan tahay Spain, sida dalalka kale ee adduunka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Dhaqaalaha quusay
Peter Lynch Xigasho
Sidee u helaan lacagta guriga?